Notch မပါ ဘောင်မဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ Samsung Galaxy ဖုန်းအသစ် – DigitalTimes.com.mm
Infinity Display ဖြစ်ဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားနေကြချိန်မှာ နောက်ထပ်ထပ်ထွက်လာမယ့် Screen ကြီးကြီးဖုန်းက ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ??
Samsung ကတော့ ဘာခလုတ်မှမပါ၊ ဘောင်မပါ၊ နားကြပ်ပေါက်မပါ လုံးဝ မျက်နှာပြင်ပြည့်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ Concept ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ မျက်နှာပြင်ပြည့်ဆိုတော့ ထိပ်ဖက် Notch ပါလာမလားစိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပါ။
မူပိုင်ခွင့်ကို အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်အမှတ်တံဆိပ်ရုံးမှာ ဒီတစ်ပတ်ကမှ တင်ထားတာပါ။ ဒီ Concept ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်နဲ့ ဘေးဘက်ဘောင်တွေက လုံးဝဘောင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီး ထိပ်ဖက်မှာတော့ Notch မပါတဲ့ ဘောင်သေးသေးလေးတစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ Samsung ရဲ့ Note ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး အနားသတ်တွေကလည်း ခုံးထားတဲ့အတွက် ပြောရရင် Note 8 နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Note9ဖုန်းတွေက သြဂုတ်လမှာထွက်တော့မှာဖြစ်လို့ လုံးဝဘောင်မဲ့ Infinity Display ကတော့ ဒီနှစ်အတွက် မှန်းလို့မရတော့ပါဘူး။
ဒီဇိုင်းပိုင်းကကြည့်ရင်တော့ ဒီနှစ် Note 8 မှာ Under Display Fingerprint Sensor မပါလို့ စိတ်ပျက်ခဲ့ကြတဲ့ Note Fan တွေအတွက် စိတ်တိုင်းကျစေနိုင်လောက်မယ့် ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်ထွက်လာရင်ပေါ့။ နားကြပ်ပေါက်မပါတာကတော့ သတင်းဆိုးလို့ပြောရမလားပါပဲ။ ဒါက Concept ဒီဇိုင်းကိုမူပိုင်ခွင့်တင်ထားတုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။ နောင်မှာဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေလာမလဲဆိုတာကတော့ Samsung ဆီကနေ နားစွင့်နေရဦးမှာပါ။
Infinity Display ဖွဈဖို့ အပွိုငျအဆိုငျကွိုးစားနကွေခြိနျမှာ နောကျထပျထပျထှကျလာမယျ့ Screen ကွီးကွီးဖုနျးက ဘာဖွဈနိုငျမလဲ??
Samsung ကတော့ ဘာခလုတျမှမပါ၊ ဘောငျမပါ၊ နားကွပျပေါကျမပါ လုံးဝ မကျြနှာပွငျပွညျ့ဖုနျးတဈလုံးရဲ့ Concept ဒီဇိုငျးတဈခုကို မူပိုငျခှငျ့တငျလိုကျပါပွီ။ မကျြနှာပွငျပွညျ့ဆိုတော့ ထိပျဖကျ Notch ပါလာမလားစိုးရိမျနတေဲ့သူတှအေတှကျတော့ စိုးရိမျစရာမရှိဘူးလို့ပွောရမှာပါ။
မူပိုငျခှငျ့ကို အမရေိကနျမူပိုငျခှငျ့အမှတျတံဆိပျရုံးမှာ ဒီတဈပတျကမှ တငျထားတာပါ။ ဒီ Concept ဖုနျးရဲ့အောကျဘကျနဲ့ ဘေးဘကျဘောငျတှကေ လုံးဝဘောငျမဲ့ဖွဈသှားပွီး ထိပျဖကျမှာတော့ Notch မပါတဲ့ ဘောငျသေးသေးလေးတဈခုကို တှရေ့ပါတယျ။ Samsung ရဲ့ Note ဒီဇိုငျးပုံစံမြိုးဖွဈပွီး အနားသတျတှကေလညျး ခုံးထားတဲ့အတှကျ ပွောရရငျ Note 8 နဲ့ခပျဆငျဆငျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ Note9ဖုနျးတှကေ သွဂုတျလမှာထှကျတော့မှာဖွဈလို့ လုံးဝဘောငျမဲ့ Infinity Display ကတော့ ဒီနှဈအတှကျ မှနျးလို့မရတော့ပါဘူး။
ဒီဇိုငျးပိုငျးကကွညျ့ရငျတော့ ဒီနှဈ Note 8 မှာ Under Display Fingerprint Sensor မပါလို့ စိတျပကျြခဲ့ကွတဲ့ Note Fan တှအေတှကျ စိတျတိုငျးကစြနေိုငျလောကျမယျ့ ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာမယျထငျပါတယျ။ တကယျထှကျလာရငျပေါ့။ နားကွပျပေါကျမပါတာကတော့ သတငျးဆိုးလို့ပွောရမလားပါပဲ။ ဒါက Concept ဒီဇိုငျးကိုမူပိုငျခှငျ့တငျထားတုနျးပဲရှိပါသေးတယျ။ နောငျမှာဘယျလိုအပွောငျးအလဲတှလောမလဲဆိုတာကတော့ Samsung ဆီကနေ နားစှငျ့နရေဦးမှာပါ။